‘पदाधिकारी संख्या २३ पुर्याएर भए पनि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुनुपर्छ’ – Nepal Press
२०७८ मंसिर ९ गते १५:२४
२०३७ सालमा विद्यार्थी राजनीतिबाट एमालेको राजनीतिमा उदाएका नेता हुन्, सुभाष कर्माचार्य । पार्टी भित्र निडर र हक्की स्वभावका नेता कर्माचार्य २०५८ देखि २०६६ सालसम्म एमाले सिन्धुपाल्चोक पार्टी प्रमुख भए । माओवादी युद्धमा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरुलाई माओवादीले दुःख दिने क्रम बढेपछि सशक्त प्रतिकारमा समेत उत्रिएका नेता कर्माचार्य २०५६ सालमा सिन्धुपाल्चोक दुईबाट संसदमा निर्वाचित भए । उनै नेता कर्माचार्यले एमालेको दशौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । प्रस्तुत छ, एमाले महाधिवेशन र उनको उम्मेदवारी घोषणाको सन्दर्भमा गरिएको कुराकानीः
कतिको लागेको छ महाधिवेशन ?
स्वभाविक रुपमा यो महाधिवेशन मलाई मात्र लाग्ने कुरा भएन, सबैलाई नै लागेको छ । मुलुको सबैभन्दा ठूलो दललाई महाधिवेशन लागेपछि सबैलाई लाग्नु स्वभाविक पनि हो । त्यहीं पार्टीको एक नेता तथा कार्यकर्ता भएको हिसावले मलाई त झन् महाधिवेशन नलाग्ने कुरै भएन ।
कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेका व्यक्तिलाई झनै यो महाधिवेशन लागिरहको छ । हिजो एकता भएर बनेको नेकपा हुँदा हामी एउटा विग्रहबाट गुज्रियौं । त्यसैले पनि अहिलेको महाधिवेशन अघिपछिको महाधिवेशन भन्दा फरक छ ।
अहिलेको महाधिवेशनले नेकपा एमालेलाई एकतावद्ध गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सबैको चासोको विषय पनि बनेको छ । यो सबैको सरोकारको विषय पनि हो । यसलाई सबैले महत्वका साथ हेरिरहेका छन् । स्वभाविक रुपमा यस्तो अवस्थामा मलाई महाधिवेशन नलाग्ने भन्ने त कुरै छैन । एकदमै लागेको छ ।
विधान अधिवेशन भइसकेकाले यो महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनकै सर्वत्र चर्चा छ, नेतृत्वमा सर्वसम्मत होला कि प्रतिस्पर्धा ?
तपाईंलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो । आजको आवश्यकता भनेको सर्वसम्मत हो । किनभने नेकपा एमाले नेकपाकालीन अवस्थामा एकदमै तितो अवस्थाबाट गु्ज्रिएको हो ।
अहिलेसम्म आइपुग्दा छुट्टा–छुट्टै खालका मनोविज्ञान छन् । एमालेमा पूर्व माओवादीको पंक्ती पनि छ । नेकपा एमालेभित्र पनि फरक–फरक विचारधारा भएका व्यक्ति छन् । त्यसकारण महाधिवेशनले सबै खालका व्यक्तिलाई समेट्नुपर्ने अवस्था अहिलेको महाधिवेशनको काँधमा जिम्मेवारी छ ।
यसरी भनिरहँदा मैले चुनावबाट भाग्नुपर्छ भन्न खोजेको पनि होइन । तर, अहिलेको अवस्थालाई बझेर नेतृत्व निर्माण हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट विवेक र विचार पुर्याएर नेतृत्व निर्माण गर्यो भने राम्रो नेतृत्व निर्माण हुन्छ भन्ने लाग्छ । अहिले प्रतिस्पर्धाभन्दा सहमतिमा नै निर्माण हुनु राम्रो हो । त्यसैबाट सबैको भलो हुन्छ र पार्टीको पनि भलो हुन्छ ।
१० बुँदे सम्झौता गरेर एमालेमै रहेकालाई फरक धारका रुपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ, त्यस्तो हो ?
पहिलो कुरा त अब त्यो पुरानो बिषय भइसक्यो । पहिलेको नजरबाट हेर्न जरुरी छैन । कम्युनिष्ट पार्टी भित्र विचारमा बहस हुनु राम्रो हो । तर यसलाई एउटा सन्दर्भबाट निकास दिइसकेका छौं । तर कहिलेकाही कसैकसैको मनमा उत्पन्न हुनुलाई अस्वभाविक मान्न सकिँदैन । यो महाधिवेशनबाट यी तमाम खालका सोच समाप्त गर्न सक्नुपर्छ ।
सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्दा पदाधिकारीमा माओवादी केन्द्रबाट आएका र १० बुँदे सम्झौता गरेर एमालेमै रहेकाहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ?
अहिलेको सन्दर्भमा भन्दा विधान महाधिवेशनबनाट १५ सदस्यीय पदाधिकारी तय गरका छौं । हिजो नेतृत्वमा रहनुभएका र अहिले पदाधिकारी तहमा बढुवा गर्ने अनुहारलाई हेर्ने हो भने केही बढाउन सकियो भने पूर्वमाओवादीबाट आएका वा १० बुँदेबाट आएका सबैको व्यवस्थापन हुनसक्छ । हुन त मेरो यो निजी विचार हो । यो कुरा मैले विधान महाधिवेशनमा पनि राखेको थिएँ । १५ सदस्यीय पदाधिकारीलाई २१ देखि २३ सम्म पुर्याउन सकियो भने सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।
तपाईं पनि केन्द्रीय सदस्यमा उठ्ने चर्चा छ, हो ?
हो, मैले केन्द्रीय सदस्यमा उठ्ने योजना बनाएको छु । घोषणा नै त नेतृत्वसँग बसेर गर्छु । तर मेरो त्यो अपेक्षा पनि छ । उम्मेदवारीका साथ अघि बढ्ने सोच छ ।
तपाईंको उम्मेदवारी चाहिँ केका लागि ?
मैले मूलतः दुई कुरामा जोड दिएको छु । विगत चार दशकदेखि नेकपा एमालेको आन्दोलतमा छु । मैले २० औ वर्ष नेकपा एमालेबाट जिल्लामा राजनीति र नेतृत्व गरेको छु । दुईपटक जिल्लाको प्रमुख र दुईपटक उपप्रमुखसमेत भइसकेको छु ।
त्यतिमात्र होइन, म चारपटक नेकपा एमालेबाट सांसदमा उठेको छु । कहिले जितेको छु त कहिले पराजित पनि भएको छु । खासगरी अहिले पनि म एमाले प्रदेश कमिटीको सचिवालय सदस्य छु । यो महाधिवेशनको कुरा गर्दा ६ पटक महाधिवेशनको प्रतिनिधित्व गरेको छु ।
त्यसैले यो अधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा दाबी गर्नु स्वभाविक पनि छ । अब म जिल्लातहबाट माथि उठेर केही योगदान गरौं । पार्टीको लक्ष्य पूरा गरौं । त्यसका लागि फराकिलो ठाउँ खोजिरहेको छु र त्यो मेरा लागि फराकिलो ठाउँ भनेकै केन्द्रीय सदस्य भएकाले यसमा मैले दाबी गर्न खोजेको हो ।
एमालेको यो महाधिवेशनले दिनुपर्ने खास सन्देश के हो ?
यो महाधिवेशनले नेकपा एमाले एकतावद्ध छ भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ । त्योसंगै न्यायपालिका र संवदैधानिक संकट पनि देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा एमालेको अधिवेशनको अर्को सन्देश भनेको यो संविधान निर्माण गर्नका लागि मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने पार्टी हो । त्यसैले महाधिवेशनले यो अन्यौलता पनि हटाउनुपर्ने जरुरी छ ।
पदाधिकारीमा सहमति भए पनि केन्द्रीय सदस्यमा चुनाव हुने निश्चितप्रायः छ, यसले एमालेमा फरकधार अर्थात् गुटबन्दी बनाउने त होइन ?
देशव्यापी रुपमा वडादेखि पालिकाहुँदै अहिले हामी महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनौट गर्ने अवस्थासम्म सर्वसम्मत तरिकाले नेतृत्व र संगठन निर्माण गरेका छौ । छिटफुटबाहेक हामीले उच्च समझदारीसहित संगठन निर्माण गरेका छौं ।
यसैले यसको सन्देश भनेको तल सबै सर्वसम्मत गर्ने अनि माथि चुनाव नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन नि । त्यसकारण पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य पनि सर्वसम्मत हुनुपर्छ । तर, कथमकदाचित भएन भने विधिसम्मत तरिकारले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ ।
मैले देखेअनुसार देशव्यापी रुपमा २५ औं वर्ष पार्टीमा योगदान गरेका नेता कार्यकर्ता प्रतिनिधिका रुपमा आएका छन् । त्यसैले प्रतिनिधिले परिपक्व निर्णय गर्नेछन् । हिजोको जस्तो गुटगत गन्ध आउँदैन ।
प्रकाशित: २०७८ मंसिर ९ गते १५:२४